သုံးပှငျ့ဆိုငျ (သို့) စှနျ့စားမှု၊ ဘဝ၊ စီးပှားရေး | မာသငျ
မတိုးတကျရငျ…..၊ အကောငျးဆုံးဆိုတာ ဖွဈမလာနိုငျဘူး။
အကောငျးဆုံးဆိုတာ ဖွဈမလာရငျ..၊ ပြျောရှငျကနြေပျနိုငျမှာမဟုတျဘူး။
ဘယျအရာက ဘဝမှာ အဓိပ်ပါယျ ရှိသေးလို့တုနျး ။ ။
စီးပှားရေး၊ ဘ၀ နဲ့စှနျ့စားမှု ဆိုတာ ဆကျစပျနတေယျ။
လှတျလပျတဲ့ ဘ၀ ကို ပိုငျဆိုငျလာပါလိမျ့မယျ။
if you cannot be happy, what else matters ?
Willingly accept the fact that risks will set you free.
သုံးပွင့်ဆိုင် (သို့ )စွန့် စားမှု၊ ဘ၀၊ စီးပွားရေး
မစွန့် စားနိုင်ရင်…၊ မတိုးတက်နိုင်ဘူး။
မတိုးတက်ရင်…..၊ အကောင်းဆုံးဆိုတာ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။
အကောင်းဆုံးဆိုတာ ဖြစ်မလာရင်..၊ ပျော်ရွင်ကျေနပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဘယ်အရာက ဘ၀မှာ အဓိပ္ပါယ် ရှိသေးလို့ တုန်း ။ ။
စီးပွားရေး၊ ဘ၀ နဲ့ စွန့် စားမှု ဆိုတာ ဆက်စပ်နေတယ်။
စွန့် စားမှု နဲ့ စတင်ပါ။
လွတ်လပ်တဲ့ ဘ၀ ကို ပိုင်ဆိုင်လာပါလိမ့်မယ်။